कसरी हुन्छ ज्यानमारा भाइरसको नामाकरण ?
निर्वान झापाली काठमाडौं, १८ माघ
समय समयमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा प्राणघातक भाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिने गरेको छ । अहिले पनि चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भइरहेको छ ।
मुख्यतः एसियाली देश यस भाइरसबाट चरम जोखिममा छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, भियतनामलगायत विभिन्न एसियाली देशसहित अमेरिकामा पनि यसको सङ्क्रमण सुरु भइसकेको छ ।
केही वर्ष पहिले अफ्रिकामा इबोला भाइरसले योभन्दा ठूलो महामारी फैलाएको थियो । जर्मनीबाट फैलिएको इतिहासकै सबैभन्दा खतरनाक मारबर्ग भाइरसको आतङ्क पश्चिमी मुलुकले सायदै बिर्सिएका होलान् ।
विश्वले विभिन्न कालखण्डमा बारम्बार यस्ता प्राणघातक भाइरसको सामना गरिरहेको छ । वैज्ञानिकहरूले कहिले समयमै उपचार पत्ता लगाएर लाखौँ प्राण बचाउँछन् भने कहिले लाखौँको मृत्यु भएपछि मात्र उपचार पत्ता लाग्छ । तर, एचआईभी, मारबर्गलगायत केही प्राणघातक भाइरस छन्, जसको आजसम्म उपचार पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
भाइरसको उपचार र रोकथाम चिकित्सा विज्ञानको पाटो भयो । महामारी निम्त्याउने यस्ता प्राणघातक भाइरसहरूको अर्को पनि रोचक पक्ष छ, त्यो हो– यिनीहरूको नाम ।
यस्ता भाइरसहरूका नाम एकदमै पृथक हुन्छन् । भाइरसको पहिचान र नामकरण वैज्ञानिक पद्दति हो । वैज्ञानिक नामकरण गर्नुलाई विज्ञानको भाषामा ‘नोमेनक्लेचर’ भनिन्छ ।
भाइरसको अध्ययन गर्ने विज्ञानको विधालाई ‘भाइरोलोजी’ भनिन्छ । भाइरोलोजीमा भाइरसको नोमेनक्लेचर र वर्गीकरणको छुट्टै नियम छ । सामान्यतः भाइरसको नामकरण यसको उद्गमस्थल वा फैलिने तरिकाका आधारमा राखिने चलन बढी छ ।
तर, वैज्ञानिक पद्दतिबाट पहिचान र नोमेनक्लेचर गरिए पनि भाइरसको नाम सामान्य मानिस पनि अभ्यस्त हुने किसिमका हुन्छन् । यसले सर्वसाधारणलाई समाचार, जनचेतना तथा चेतावनी दिन सहजता प्रदान गर्छ ।
हरेक भाइरसको नामकरणका पछाडि फरक फरक कथा र पृष्ठभूमि छन् । त्यसो भए इबोला, कोरोना, एचआईभी, राइनोलगायत विभिन्न भाइरसको नाम कसरी र के आधारमा राखियो होला त ?
इबोला भाइरस पहिलो पटक सन् १९७६ मा देखिएको थियो । दक्षिणी सुडानको एन्जारा र कङ्गो (तत्कालीन जाइर)को याम्बुकु गाउँमा इबोला भाइरस एकै पटक फैलिएको थियो ।
इबोलाको सबैभन्दा ठूलो महामारी भने डिसेम्बर २०१३ देखि जनवरी २०१६ सम्म फैलिएको थियो । त्यसबेला २८ हजार ६ सय ४६ जनामा यसको सङ्क्रमण देखिएको थियो भने ११ हजार ३ सय २३ को मृत्यु भएको थियो ।
इबोला भाइरसको नामकरणका विषयमा वैज्ञानिकहरूमा निकै बहस भएको थियो । यस विषयमा इबोला भाइरसका सहखोजकर्ता डा. पिटर पायोटले आफ्नो संस्मरण ‘नो टाइम टु लुजः अ लाइफ इन पर्सुट अफ डेड्ली भाइरस’मा विस्तारमा उल्लेख पनि गरेका छन् ।
सुरुमा ‘याम्बुकु’ नाम दिन खोजिएको इबोला भाइरसको नामकरण नदीको नामबाट गरिएको हो । याम्बुकु गाउँ नजिकै भएर ‘इबोला’ नामको नदी बग्ने गर्छ । स्थानीय लिङ्गला भाषामा इबोलाको अर्थ हुन्छ– ‘कालो नदी ।’
शब्दको अर्थ र भाइरसले त्यस क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभावमा वैज्ञानिकहरूले समानता देखे । अफ्रिकाका लागि त्यसबेला हरेक दिन ‘कालो दिन’ थिए । अन्ततः सबै वैज्ञानिकबीच भाइरसको नाम ‘इबोला’ नै राख्ने सहमति भएको थियो ।
एचआईभी र एड्स एकअर्काका परिपूरक हुन् । एचआईभी अर्थात् ह्युमन इम्युनो–डिफिसिएन्सी भाइरस जनावरबाट मान्छेमा सरेको रोग हो । एचआईभी भाइरसको सङ्क्रमण भएपछि बिरामीमा एड्स (एक्वायर्ड इम्युनो–डिफिसिएन्सी सिन्ड्रोम) देखिन्छ ।
मानिसमा एड्स पहिलो पटक सन् १९८१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेटिएको थियो । एचआईभी भने सन् १९८३ मा अमेरिकी र फ्रेन्च अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाएको थियो ।
अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट ग्यालोको टोलीले एचआईभीको गुण ह्युमन टी–लिम्फोट्रोपिक भाइरस (एचटीएलभी)सँग मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्दै एचटीएलभी–३ नाम दिए । फ्रेन्कोइज बेरी–सिनोसी र लुक मोन्टेग्नियरको फ्रेन्च टोलीले भने आफूले पत्ता लगाएको भाइरसलाई लिम्फेडेनोपेथी–एसोसिएटेड भाइरस (एलएभी) नाम दिए ।
तर, सन् १९८६ मा यी दुवै भाइरस एउटै भएको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि बल्ल सो भाइरसलाई एचआईभी नाम दिइएको हो ।
यस्तै, अमेरिकाले एड्सको अध्ययन गर्ने जिम्मा रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सीडीसी)लाई दिएको थियो । सुरुमा सीडीसीले एड्सलाई ‘फो–एच डिजिज’ अर्थात् ४एच रोग नाम दिएको थियो । किनकि, यसका सङ्क्रमित मुख्यतः हेरोइन प्रयोगकर्ता, होमोसेक्सुअल (समलिङ्गी), हामोफिलियाक र हाइटीका बासिन्दा रहेका थिए ।
एड्स सुरुमा समलिङ्गीहरूमा बढी देखिएकाले मिडियाले त्यसलाई गे–रिलेटेड इम्युन डिफिसिएन्सी (ग्रिड) नाम दिइएका थिए । तर, यो रोग समलिङ्गीमा मात्र नभएर सबैलाई लाग्ने देखिएपछि सीडीसीको जुलाई १९८२ मा बसेको बैठकले एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसिएन्सी सिन्ड्रोम (एड्स) नाम पारित गर्दै सेप्टेम्बर १९८२ बाट लागू गरेको थियो ।
कोरोना भाइरस विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । सन् २००३ मा आतङ्क फैलाएको ‘सार्स’ तथा सन् २०१२ मा खाडी मुलुक आक्रान्त बनाएको ‘मेर्स’ भिन्न प्रकारका कोरोना भाइरसकै रूप थिए ।
अहिले चीनबाट सुरु भएर एसियाका विभिन्न मुलुकसहित नेपाललाई पनि सशङ्कित बनाएको कोरोना भाइरस नयाँ प्रकारको हो । डब्ल्यूएचओले यसलाई नोभेल कोरोना भाइरस नाम दिएको छ ।
कोरोना भाइरस पहिलो पटक सन् १९६० को दशकमा पत्ता लागेको थियो । पहिलो कोरोना भाइरस कुखुरामा देखिएको थियो भने त्यसपछि २ किसिमका कोरोना भाइरसमा मानिसमा फेला परेका थिए ।
‘कोरोना भाइरस’ ग्रीक भाषाको ‘कोरोन’ र ल्याटिन भाषाको ‘कोरोना’ शब्दबाट प्रतिपादन गरिएको हो । ‘कोरोना’को अर्थ श्रीपेच वा माला हो ।
इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा कोरोना भाइरसले श्रीपेच लगाएजस्तो देखिन्छ । यसको वरिपरि फोका निस्किएर सूर्यबाट निस्किने चमक अर्थात् ‘सोलार कोरोना’ जस्तो आकृति पनि बनेको हुन्छ । त्यसैले, यसको नाम कोरोना भाइरस राखिएको हो ।
मारबर्ग भाइरस पहिलो पटक सन् १९६७ मा देखिएको थियो । सुरुमा जर्मनीको मारबर्ग शहरमा देखिएको यो भाइरस त्यसपछि फ्राङ्कफर्ट र युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा पनि देखापरेको थियो ।
पहिलो पटक जर्मनीको मारबर्ग शहरमा भेटिएका कारण यसको नाम मारबर्ग राखिएको थियो । यो भाइरसको अहिलेसम्म कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन ।
तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएमा न्युक्लियर तथा बायोलोजिकल बमको अत्यधिक प्रयोग हुने निश्चित छ । तेस्रो विश्वयुद्धको ब्रह्मास्त्र स्वरूप रुस र अमेरिकाले यही मारबर्ग भाइरस प्रयोग गरेर बायोलोजिकल हतियार बनाएका छन् ।
सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भएको अमेरिका र कोरियाबीचको कोरियन युद्ध लडेका सेनाहरूमा पहिलो पटक यो भाइरस भेटिएको थियो । त्यसबेला ३ हजारभन्दा बढी सैनिकमा यो भाइरसका कारण हेमोरेजिक ज्वरो देखिएको थियो ।
दक्षिण कोरियाको हेन्तान नदीको नामबाट यसको नामकरण गरिएको थियो । मुसा प्रजातिका जनावरबाट सर्ने यस भाइरसको उपचार खोज्न २५ वर्ष लागेको थियो ।
सन् १९७६ मा कोरियाको भाइरोलोजिस्ट हो वाङ लीले यसको उपचार विधि पत्ता लगाएका थिए । औषधि विज्ञानमा रोगको उपचारका ३ वटा प्रक्रिया हुन्छन्ः कारक भाइरस पत्ता लगाउने, निदानको पद्दति विकास गर्ने र निर्मूल बनाउने भ्याक्सिन विकास गर्ने ।
औषधि विज्ञानको इतिहासमा हो वाङ ली कुनै पनि रोगको यी ३ वटै प्रक्रिया आफैँले सम्पन्न गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।
रेबिज भाइरसलाई पछि गएर रेबिज लिस्साभाइरस भन्न थालियो । यो भाइरस मानिससहित सबै प्रजातिका जनावरमा सर्न र सङ्क्रमण गर्न सक्षम भाइरस हो ।
‘रेबिज’ शब्द संस्कृतको ‘रभष’ शब्द र ल्याटिनको ‘रेबिस’ शब्दबाट प्रतिपादन गरिएको हो । ‘रभष’को अर्थ क्रोध हुन्छ भने ‘रेबिस’को अर्थ पागलपन हुन्छ ।
लेस्सा भाइरसको पूरा नाम लेस्सा म्यामरेना भाइरस हो । सन् १९६९ मा लौरा वाइन नामकी एक नर्समा यो भाइरस पहिलो पटक भेटिएको थियो । नाइजेरियाको बोर्नो राज्यको लेस्सा भन्ने गाउँमा काम गर्ने ती नर्समा उनले स्याहार गरेको बिरामीबाट सरेको थियो ।
लेस्सा गाउँमा पहिलो पटक भेटिएका कारण यसको नाम लेस्सा भाइरस राखिएको हो । पश्चिमी अफ्रिकामा हरेक वर्ष ३ लाखदेखि ५ लाख व्यक्तिमा यो भाइरसको सङ्क्रमण देखिने गरेको छ, जसमध्ये कम्तीमा ५ हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । यो भाइरसको अहिलेसम्म कुनै उपचार फेला परेको छैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १८, २०७६, ०७:५९:००
निर्वान झापाली @nirwanjhapali
विदेशी लिगमा चम्किएका १७ नेपाली खेलाडी
अमेरिका–इरान युद्धबाट एक दिनमै करोडौं कमाउनेहरू
अस्ट्रेलियालाई सधैं डढेलोको डर
दशकका १० क्रान्तिकारी प्रविधि
पटक–पटक बलात्कृत १२ वर्षीया छोरी भन्छिन्ः सरी अम्मा !
कोभिड १९ : अपरिचितलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध
१५ कैदी कैद किनेर छुटे
कोरोना कोषमा संचय कोषको २ करोड
कसरी छापिन्छ नेपाली नोट ? हरेक वर्ष किन जल्छन् खर्बौ मूल्यका नाेट ?
आइसोलेसनमा मृत्यु भएका बाबुरामकाे रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
कोरोना आशंका गरिएकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोभिड- १९ : राजबिराजमा किटनाशक औषधि छर्किइयो
जर्मनीको हेस्सी क्षेत्रका अर्थ राज्यमन्त्रीले गरे आत्महत्या
यी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशलाई पठाएका सामग्री
सङ्गठित श्रमिकका लागि सरकारले दिएको ३० करोड राहत